यसकारण महालक्ष्मी विकास बैंकको एजीएममा सञ्चालक निर्वाचनको कार्यक्रम स्थगित
काठमाण्डौ । महालक्ष्मी विकास बैंकको आज डाकिएको २० औँ वार्षिक साधारणसभामा सञ्चालकको निर्वाचन गर्ने कार्यक्रम स्थगित गरिएको छ। उच्च अदालतको आदेशपछि शुक्रबार बसेको बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले वार्षिक साधारणसभामा सञ्चालक निर्वाचनको कार्यक्रम स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले साधारणसभाको अजेन्डामा रहेको सञ्चालक निर्वाचनको...
काठमाण्डौ । महालक्ष्मी विकास बैंक र निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले आज पुस २५ गते आआफ्नो वार्षिक साधारणसभा डोकेका छन्। महालक्ष्मी विकास बैंकको २० औँ वार्षिक साधारणसभा काठमाण्डौको भद्रकालीस्थित आर्मी अफिसर्स क्लबमा बिहान ११ बजेबाट सुरु हुनेछ।सभामा सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरेबमोजिम आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को सञ्चित...
छिमेक लघुवित्तको एजीएमबाट ३०% लाभांश पारित
काठमाण्डौ । छिमेक लुघवित्त वित्तीय संस्थाको २० औँ वार्षिक साधारणसभाबाट गत आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तावित कुल ३० प्रतिशत लाभांश पारित भएको छ। हेटांैडाको होटल सामनामा आज सम्पन्न वार्षिक साधारणसभाले गत आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तावित २७ प्रतिशत बोनस सेयर र ३ प्रतिशत नगद लाभांश (करसहित) अनुमोदन गरेको हो। सभाबाट सर्वसाधारण सेयरधनीका...
नागरिक स्टक डिलरसहित ४ कम्पनीको एजीएम आज, कसको के–के छन् अजेन्डा ?
काठमाण्डौ । नागरिक स्टक डिलर कम्पनी लिमिटेडसहित ४ कम्पनीले आज पुस २३ गते वार्षिक साधारणसभा (एजीएम) गर्दैछन्। नगरिक स्टक डिलर, ज्योति विकास बैंक, चिलिमे हाइड्रोपावर र छिमेक लघुवित्तले आज वार्षिक साधारणसभा गर्ने भएका हुन्। नागरिक स्टक डिलरको दोस्रो वार्षिक साधारणसभा नयाँबानेश्वरस्थित नागरिक लगानी कोष भवनमा अपराह्न ३ः३० बजेबाट...
कस्तो रहला आगामी साता सेयर बजारको यात्रा ?
– अर्जुन तिमिल्सिना काठमाण्डौ । यो साता सेयर बजारको यात्रा सुखद् रह्यो। पुस महिनाको सुरुआततिर करिब २२६० को न्यून विन्दु बनाएर फर्किएको बजार सामान्य करेक्सनबाहेक निरन्तर अगाडि बढिरहेको छ। बजारका अनेकन हल्लालाई चिर्दै बजार आफ्नो नागबेली चालमा अगाडि बढिरहेको देखिन्छ। यसरी बजार बढ्नुमा तरलता सहज बन्दै जानुले नै रहेको बजार जानकार...
काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सूचीकृत एक वाणिज्य बैंकसहित ३ कम्पनीले आज पुस २२ गते आफ्नो वार्षिक साधारणसभा गर्दैछन्। एनएमबि बैंक, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी र हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल) ले वार्षिक साधारणसभा आज गर्न लागेका हुन्। एनएमबी बैंकले आफ्नो २६ औँ वार्षिक...
काठमाण्डौ । नाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले आफ्नो सातौँ वार्षिक साधारणसभा डोकेको छ। संस्थाको सञ्चालक समितिको मंगलबार बसेको बैठकले वार्षिक साधारणसभा आउँदो माघ १४ गते आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो। सभा धादिङको नौबिसेस्थित नौबिसे एग्रो रिसोर्टमा बिहान ११ बजेदेखि अनलाइन माध्यमबाट हुनेछ। सभाले गत आर्थिक वर्षका लागि...
नेपाल एसबिआई बैंकको एजीएमबाट लाभांश पारित
काठमाण्डौ । गत आर्थिक वर्षको लाभांश अनुमोदन गर्दै नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेडको २८ औँ वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न भएको छ। काठमाण्डौको भद्रकालीस्थित त्रिभुवन आर्मी अफिसर्स क्लबमा आज सम्पन्न वार्षिक साधारणसभाले गत आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तावित कुल ५.३१ प्रतिशत लाभांश अनुमोदन गरेको छ। जसमा ५.५ प्रतिशत बोनस सेयर र १.८१ प्रतिशत नगद लाभांश...
सर्वोत्तम सिमेन्टले डाक्यो वार्षिक साधारणसभा, यस्ता छन् मुख्य अजेन्डा
काठमाण्डौ । सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेडले आफ्नो तेस्रो वार्षिक साधारणसभा डोकेको छ। कम्पनी सञ्चालक समितिको पुस १८ गते बसेको बैठकले आउँदो माघ ११ गते काठमाण्डौको तीनकुनेस्थित कम्पनीको कार्यालयमा वार्षिक साधारणसभा आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो। सभा बिहान १० बजेबाट सुरु हुनेछ। सभाले बुक बिल्डिङ विधिबाट आईपीओ निष्कासन गर्ने विशेष...
प्रभु बैंकको एजीएमबाट १२.६३% लाभांश पारित, चुक्तापुँजी रु. १२.७० अर्ब पुग्यो
काठमाण्डौ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लाभांश अनुमोदन गर्दै प्रभु बैंकको २० औँ वार्षिक साधारणसभा आइतबार सम्पन्न भएको छ। काठमाण्डौको बबरमहलस्थित बैंकको प्रधान कार्यालयमा सम्पन्न वार्षिक साधारणसभाले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट हाल कायम चुक्तापुँजीको कुल १२.६३ प्रतिशत लाभांश पारित भएको हो। जसमा १२ प्रतिशत बोनस सेयर र ०.६३ प्रतिशत नगद लाभांश...
सीडीएससीको एजीएमबाट ४०% नगद लाभांश पारित
काठमाण्डौ । गत आर्थिक वर्षको लाभांश पारित गर्दै सीडीएससी एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडको ११ औँ वार्षिक साधारणसभा आज सम्पन्न भएको छ। काठमाण्डौको पुतलीसडकस्थित सीडीएससीको कार्यालयमा भएको सभाले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट प्रस्तावित चुक्तापुँजीको कुल ४० प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने विशेष प्रस्ताव पारित गरेको हो। सीडीएससीको सतप्रतिशत...